Mawaxaad raadineysaa qaab nololeed caafimaad iyo shirkad wax soo saar caafimaad? Ma waxaad raadineysaa koox soo saarta xirfadleyda iyo kooxda wax soo saarka? Markaa Hebei Shouzheng Trading Co., Ltd. ayaa si muuqata u diidaysa doorashadaada ugu fiican.
Hebei Shouzheng Technology Co., Ltd waa soo saare dawada dhaqameed Shiinaha ah oo waayo aragnimo sanado badan leh iyo awood farsamo oo xoog leh. Waxaan ku hawlan nahay cilmi-baaris caafimaad, horumarin iyo iibinno mid ka mid ah shirkadaha farsamada gacanta sare, waxaan sidoo kale bixinnaa adeegyo ku-tallaalidda OEM ee dhammaan shirkadaha la xiriira. Iyada oo leh tiro balaadhan, tayo wanaagsan, qiimo macquul ah iyo naqshad naqshad leh, alaabadayada ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa caafimaadka caafimaadka iyo warshadaha kale.
Waxaan helnay FDA, CE, shahaadooyinka ISO, dammaanad qaadka tayada sare ee badeecada. Kooxdayada wax-soo-saarka ee xirfadda leh, kooxda iibka xirfadleyaasha, kooxda xakamaynta tayada adag iyo naqshadeeyayaasha xirmada hibada ayaa ku siin kara adeegyo walwal la'aan. Alaabooyinkayada ayaa si ballaaran loo aqoonsan yahay oo ay aamini karaan isticmaaleyaasha waxayna la kulmi karaan si joogto ah oo isbeddelaya baahiyaha dhaqaale iyo bulsho.
Waxaan kaa caawin karnaa hagaajinta meheraddaada. Ku soo dhowow inaad nala socodsiiso haddii aad wax danno ah aad leedahay.
Telefoon: 0086- (0) 311-89201688